justfreeman: oktober 2011
ကိုပေါက် ကြာသပတေးနေ့၊ အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၄၃ မိနစ် .
နယူးဒေလီ(မဇ္ဈိမ)။ ။မလေးရှား-မြန်မာနှစ်နိုင်ငံအထိန်းသိမ်းခံများလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်အားရပ်ဆိုင်း ထားရန်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့AIPMCကကြေညာချက်ထုတ်ပြန် တောင်းဆို လိုက်သည်။
ကြာသပတေးနေ့ကထုတ်ပြန်သည့်အဆိုပါကြေညာချက်တွင်မြန်မာပြည်သားများမှာ၎င်းတို့နိုင်ငံအတွင်းလူ့ အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုမျိုးစုံကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသို့ခိုလှုံရန်ရောက်ရှိလာကြခြင်းဖြစ်၍ယခု ပြန်ပို့မည့် အစီအစဉ်အား လွန်စွာစိုးရိမ်ကြောင်း ဦးစွာဖော်ပြထားသည်။
မလေးရှားပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးDatukSeriHishammuddinHusseinကပြန်ပို့မည့်အထိန်းသိမ်းခံတထောင်ထဲ တွင်ခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားသူများနှင့်ဒုက္ခသည်များမပါဝင်ကြောင်းအင်္ဂါနေ့တွင်သတင်းထောက်များအား ပြောကြားထားသည်။
ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းများတွင်ချင်းလူမျိုးနှစ်ရာခန့်ရှိပြီးပြန်ပို့မည့်အစီအစဉ်ထဲမည်မျှပါဝင်မည်ကို မသိရှိနိုင်သေးကြောင်းချင်းဒုက္ခသည်ကော်မတီCRCမှဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးမှူးကိုဟင်နရီကမဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“UNHCRcardကိုင်တဲ့သူတွေ၊မကိုင်တဲ့သူတွေ၊Passportသက်တမ်းကုန်သွားသူတွေအကုန်ရှိတယ်။တချို့ တွေကUNHCRcardကိုင်ထားတယ်။ပြန်ပို့မယ့်အထဲသူတို့ပါမပါခွဲခြားမသိဘူးဖြစ်နေတယ်။အကုန်ပို့မယ် ဆိုရင်တော့ အဲဒီလူတွေပါ ပါသွားမှာပေါ့” ဟုသူကပြောသည်။
ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းများသို့သွားရောက်စုံစမ်းမေးမြန်းရန်မလွယ်ကူလှဘဲအထိန်းသိမ်းခံများလည်းစခန်း အပြောင်းအလဲ မကြာခဏရှိတတ်ကြောင်း ကိုဟင်နရီက ဆိုသည်။
မလေးရှား NGOတခုဖြစ်သည့် Suaramအဖွဲ့ကလည်း ဤပြန်ပို့ရေးအစီအစဉ်မှာ မြန်မာပြည်သားအချို့အား “အသက်အန္တရာယ်ကျရောက်ဖွယ်ရှိသည့်”တိုင်းပြည်တပြည်သို့တင်းအကြပ်ပြန်ပို့တဲ့သဘောဖြစ်ကြောင်း
ထို့ပြင်“မလေးရှားအစိုးရအနေဖြင့်ဒေသတွင်းရှိဒီမိုကရေစီမကျပြီးရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သည့် အစိုးရတရပ်အား အလွန်အကျွံအသိအမှတ်ပြုပေးနေခြင်း” ဟုSuaramကြေညာချက်တွင် ပါရှိသည်။
ပြန်ပို့ရေးအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သူတို့၏ စရိတ်စကများအား မည်သူက တာဝန်ယူရမည်ကိုလည်း ရှင်းလင်းစွာ မသိရသေးသကဲ့သို့ လုံခြုံရေးအာမခံချက်လည်းမရှိသည့်အတွက် သဘောမတူနိုင်ကြောင်း ကိုဟင်နရီက “ဒီလူတွေကိုပြန်ပို့ရင်တော့ဟိုမှာဒုက္ခကြုံရမှာသေချာတယ်။လက်ရှိအစိုးရရဲ့လုံခြုံရေးကဏ္ဍကိုမှန်းဆလို့ မရဘူး။ဒီကိစ္စကိုကျနော်တို့သိပ်သဘောမတူဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့နိုင်ငံအစိုးရကို မယုံဘူး” ဟု ပြောသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံတွင်ဒုတိယအများဆုံးနိုင်ငံခြားသားအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံသား၅သိန်းခန့်နေထိုင်ကြပြီး အများစုမှာ ချင်းနှင့် ကရင်လူမျိုးစုများ ဖြစ်ကြသည်။
Posted by justfreeman at 14:150comments
သဲသဲ ကြာသပတေးနေ့၊ အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၄၇ မိနစ် .
နယူးဒေလီ(မဇ္ဈိမ)။ ။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်စွန်းအနီးဖြတ်သန်းတိုက်ခက်ခဲ့သည့်O2Bမုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့် စစ်တွေမြို့အတွင်းလေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခက်ခဲ့ကာစာသင်ကျောင်းနှစ်ကျောင်းနှင့်စစ်တွေမြို့ဈေးကြီးမှ ဆိုင်ခန်းတချို့ပျက်စီးခဲ့သည်။
ကြောင့်စစ်တွေမြို့အိုးတန်း၊ကျေးပင်ကြီးနှင့်ကျောင်းတက်လမ်းရပ်ကွက်များတွင်အောက်တိုဘာလ၁၉ ရက်ကလေဆင်နှာမောင်း တိုက်ခက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ခေါင်မိုးတွေလေနဲ့ ပါသွားတယ်။ဈေးမှာလည်းခေါင်မိုးတွေလေနဲ့ပါသွားတယ်”ဟု မြို့ခံ ဦးကမဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
လေဆင်နှာမောင်းမှာညနေ၆နာရီခန့်နှင့်ည၁၂ခန့်တို့တွင်နှစ်ကြိမ်တိုက်ခက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ပထမအကြိမ် တိုက်ခက်စဉ်ကစစ်တွေဈေးကြီးအတွင်းမှဆိုင်ခန်းအချို့ပျက်စီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဒုတိယအကြိမ် တိုက်ခက်ရာတွင်စာသင်ကျောင်းနှစ်ကျောင်းပါပျက်စီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ယင်းအပူပိုင်းမုန်တိုင်းမှာတနာရီလျှင်မိုင်၆၀မှ၇၀အထိပြင်း အားရှိပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တောမြို့နှင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကော့ဘဇားမြို့အကြားဖြတ်သန်းမည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံမိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒဌာနက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းမှစ၍ သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ယင်းအပြင်မုန်တိုင်းဝင်ရောက်ချိန်တွင်ပင်လယ်ရေမှာခြောက်ပေမှရှစ်ပေအထိမြင့်တက်နိုင်သဖြင့် ဘေးကင်း ရာသို့ ရှောင်ရှားကြရန်လည်း နိုင်ငံပိုင် ရေဒီယိုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားမှတဆင့် ကြေညာခဲ့သည်။
“ရေတက်မယ်လို့ကြေငြာထားတော့ပစ္စည်းတွေအပေါ်တင်ထားတယ်။အိမ်ထဲတော့ရေမဝင်ဘူး၊ လမ်းမပေါ်လောက်ပဲတက်လာတယ်”ဟု စစ်တွေမြို့ခံကပြောသည်။ယနေ့ နံနက်တွင်လည်း လေတိုက်နှုန်း ငြိမ်သွားပြီဖြစ်သော်လည်း ပင်လယ်သို့ သင်္ဘောများ မထွက်ကြဟုလည်း သိရသည်။
မုန်တိုင်းဖြတ်သန်းမည်ဟုကြေညာခဲ့သည့်မောင်တောမြို့တွင်မူဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့သော်လည်းခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှာမူ သစ်ပင်ကျိုးကျမှုကြောင့် အနည်းငယ်ပျက်စီးသွားသည်ဟု သိရသည်။
“ရွာဘက်တွေမှာတော့ဘယ်လောက်ထိသလဲကျနော်တို့မသိရသေးဘူး။မောင်တောမြို့ပေါ်မှာတော့ခယက ရုံးလောက်ပဲသစ်ပင်ပိလို့နည်းနည်းထိသွားတယ်။ကျန်တာဘာမှမဖြစ်ဘူးနည်းနည်းပါးပါးပဲ။အခုက လေတိုက်တာရပ်သွားပြီ” ဟုမောင်တောမြို့ပေါ်ရှိ ဒေသခံတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ရွေ့လျားလျက်ရှိကာမုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့်ရခိုင်နှင့်ချင်းပြည်နယ်၊စစ်ကိုင်းနှင့်မကွေးတိုင်းတို့တွင်မိုးကြီးနိုင် မည်ဟု မိုး/ဇလမှ ယနေ့ နံနက်တွင် ကြေညာချက်ထုတ်ထားသည်။
“ကုန်းတွင်းရောက်သွားတော့မကွေးဘက်ထိမိုးရွာနိုင်တယ်။အဲဒီမှာလျှပ်တပြက်ရေကြီးတာတို့၊အန္တရာယ်ရှိနိုင် တာပေါ့”ဟုမိုး/ဇလညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးချစ်ကျော်ကဆိုသည်။ရေကြီးရေလျှံမှုကာကွယ်နိုင်ရန် အတွက်လည်းဒေသအာဏာပိုင်များသို့ အကြောင်းကြားထားည်ဟု သိရသည်။
မုန်တိုင်းမိုးကြောင့်စစ်တွေမြို့တွင်၇.၆၊မောင်တောတွင်၆.၆၉၊စစ်ကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်မြို့တွင်၂.၂၈နှင့် ချင်းပြည်နယ် ဟားခါးတို့တွင် ၁.၅ဝ လက်မအထိ တရက်အတွင်း ရွာသွန်းမြဲထက် ပိုမိုရွာသွန်းခဲ့သည်။
မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်လာမယ့်၄၈နာရီအတွင်း ချင်းတွင်းမြစ်ရေမှာ မုံရွာမြို့၏ စိုးရိမ်ရေမှတ်သို့ ရောက်ရှိနိုင်ပြီး စစ်တောင်းမြစ်ရေမှာမူ တောင်ငူမြို့တွင် စိုးရိမ်ရေမှတ်အထက် တပေ ကျော်လွန်နေပြီ ဖြစ်သည်။
မုန်တိုင်းမှာလက်ရှိတွင်တနာရီ၎ဝမှ၄၅ မိုင် ပြင်းအားရှိလေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဖြစ်ဆက်လက် ရွေ့လျား လျက်ရှိသည်။
အေးလဲ့ ကြာသပတေးနေ့၊ အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၂၂ နာရီ ၅၃ မိနစ် .
ချင်းမိုင်(မဇ္ဈိမ)။ ။ကရင်ပြည်သူ့ပါတီအဖွဲ့ဝင်တဦးပိုင်ဆင်ဖြူဟုဆိုသောဆင်မတကောင်ကိုတောင်ငူခရိုင် သစ်တောဦးစီးဋ္ဌာနကိုအောက်တိုဘာ၁၅ရက်နေ့ကအပ်နှံလိုက်ကြောင်းသိရသည်။
ပဲခူးတိုင်း၊တောင်ငူခရိုင်အုတ်တွင်းမြို့နယ်တွင်းတောင်ငူသားတဦးဖြစ်သူပိုင်ရှင်ဦးစောမိုချေး၏ သစ်ဆွဲရာတွင်ခိုင်းစေသည့်ခင်ဥမအမည်ရှိဆင်ယဉ်၊ဆင်မဲမမှတနင်္လာနေ့၌မွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ ကရင်စကားဖြင့်“မိုဂေမယ်”ဟုအမည်ပေးထားသည်။
“လောလောဆယ်အစိုးရဋ္ဌာနကတာဝန်ယူပြီးကြည့်နေမယ်။ဆင်ဖြူတော်အဂါင်္ရပ်နှင့်ကိုက်ညီမူရှိ၊မရှိ စစ်ဆေးတာ၈ဝရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ကိုက်ညီတယ်ပြောတယ်”ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ၏ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးစောစေးဝါးကမဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
လေးလသားအရွယ်ရှိယင်းဆင်အားဆင်ဖြူတော်တွင်ပါရှိရမည့်မျက်လုံးအရောင်၊ခြေသည်းအရောင်စသည့် အင်္ဂါရပ်ဆိုင်ရာများနှင့်ပြည့်စုံခြင်းရှိ၊မရှိကိုစစ်ဆေးနေခြင်းဖြစ်ကာပဲခူးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဉာဏ်ဝင်းလည်း လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သည်ဟုသိရသည်။
“ဆင်ဖြူတော်ဆိုတာရှားပါးပစ္စည်း၊ရတနာတန်းဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတော်ပဲပိုင်ဆိုင်သင့်တယ်။နိုင်ငံ တော်အတွက်ဂုဏ်သရေရှိအောင်၊အပြောင်းအလဲကာလအတွင်းမှာပိုပြီးတော့ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်လည်း ယုံကြည်မူရှိသွားအောင်”ဟုဦးစောစေးဝါကဆိုသည်။
ယခုစစ်ဆေးခံနေသည့်ဆင်ပေါက်မှာဆင်ဖြူတော်ဖြစ်မည်ဆိုပါကယခုအစိုးရသစ်လက်ထက်တွင်ပထမဆုံး ဖမ်းမိသည့်ဆင်ဖြူတော်ဖြစ်မည်ဖြစ်ကာနိုင်ငံတော်ကအဆိုပါဆင်ကိုလက်ခံရရှိခြင်း ရှိကြောင်းကြေညာခြင်း မရှိသေးကြောင်း ဆင်ပိုင်ရှင်ထံမှ သိရသည်။
မကြာသေးခင်ကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တောမြို့နယ်မေယူတောင်တွင်ဆင်ဖြူတကောင် တွေ့ရှိကြောင်းသတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့ကာဘူးသီးတောင်အခြေစိုက်အမှတ်၂၃၄တပ်ရင်းမှတပ်ရင်းမှူး ကိုယ်တိုင်လိုက်လံရှာဖွေနေကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်သတင်းများအားအသားပေးဖော်ပြနေသည့်နိရဉ္စရာ သတင်းဌာနတွင်ဖော်ပြထားသည်။
Posted by justfreeman at 13:480comments
ဧရာဝတီ on October 20, 2011 3:00 pm in သတင်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများရှိနေသည်ကိုလက်ခံ၍ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးပါရန် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာသောမတ်စ်အိုဟေး ကင်တားနားကသမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရထံတောင်းဆိုလိုက်သည်။
မစ္စတာကင်တားနားကကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံသို့တင်သွင်းသောအစီရင်ခံစာတွင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်း လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများဖြေရင်းပေးရန်မြန်မာအစိုးရအားတောင်းဆိုစာကိုထည့်သွင်းရေးသားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
၎င်း၏အစီအရင်ခံစာ၌မြန်မာနိုင်ငံတွင်တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများနှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သော တခြားဘာသာဝင်များအားခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း၊နှိမ့်ချဆက်ဆံခြင်းများရှိနေသေးကြောင်း၊လွတ်လပ်၍မျှတမှု မရှိသည့်တရားစီရေးစနစ်ကိုဆက်လက်လက်ကိုင်ထားနေဆဲဖြစ်ကြောင်း၊နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအား ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်ကြောင်း၊အကျဉ်းသားများအားစစ်ကျောရာတွင်ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်မှုများ ရှိနေသေးကြောင်းနှင့်အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်စေခြင်းများ၊အကျဉ်းသားများကိုပေါ်တာအဖြစ်အသုံးချခြင်း သို့မဟုတ်လူသားဒိုင်းများအဖြစ်စစ်မြေပြင်များ၌အသုံးပြုနေခြင်းများရှိနေသေးကြောင်း၊အဆိုပါ အခြေအနေများကိုသမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရအနေဖြင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းစေချင်ကြောင်းရေးသားထားသည်။
တချိန်တည်းတွင်မြန်မာအစိုးရသစ်သည်လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေများကိုပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပြီးဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးတွင်ပိုမို၍နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း လုပ်ဆောင်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း လည်း မစ္စတာကင်တားနားက ပြောဆိုထားသည်။
မစ္စတာကင်တားနားသည်သြဂုတ်လအတွင်းကမြန်မာပြည်တွင်းသို့သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး အစိုးရခေါင်းဆောင်များ၊မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင် အတိုက်အခံတချို့နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။၎င်းမြန်မာပြည်သို့သွားရောက်စဉ်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား၂၀၀၀ ကျော်ကိုလွှတ်ပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။
မြန်မာအစိုးရ၏လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အရမကြာခင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား၂၀၀ကျော်ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာခြင်းကို၎င်းအနေဖြင့်ကြိုဆိုကြောင်း၊သို့ရာတွင်ကျန်ရှိနေသေးသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားနိုဝင်ဘာတွင်ကျင်းပမည့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် လွှတ်ပေးရန်မျှော်လင့်ကြောင်း အစီအရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
“ဒီလိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကိုလွှတ်ပေးတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဦးတည်သွားနေတဲ့မြန်မာအစိုး ရသစ်ရဲ့လတ်တလောဖြစ်စဉ်တွေအတွက်ပိုမိုအကျိုးရှိစေမယ်၊အမျိုးသားပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေးအတွက်လည်းမရှိမဖြစ်လုပ်ရမယ့်ခြေလှမ်းတရပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်”ဟုမစ္စတာ ကင်တားနားက ၎င်း၏ အစီအရင်ခံစာတွင် ထည့်သွင်း ပြောဆိုထားသည်။
မစ္စတာကင်တားနားကမြန်မာအစိုးရအနေဖြင့်နိုင်ငံရေးပါတီများ၏လှုပ်ရှားမှုများအပေါ် ကန့်သတ်ထားသည်များကိုရုတ်သိမ်းပေးရန်နှင့်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးရန် အပါအဝင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့်ကိုယ်စားလှယ်များ၏မှတ်ပုံတင်ကြေးမြင့်မားနေသည်ကို လျှော့ချပေးရန်အတွက်လည်း တောင်းဆိုထားသည်။
မြန်မာအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်တရပ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်ကိုမစ္စတာကင်တားနားက ကြိုဆိုသော်လည်းထိုကော်မရှင်အနေဖြင့်မည်သို့လုပ်ဆောင်မည်၊၎င်းကော်မရှင်၏အခန်းကဏ္ဍနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်တို့ မည်မျှအထိ ရှိနိုင်မည် ဆိုသည့်အချက် ကိုမူ မေးခွန်းထုတ်ထားသည်။
Posted by justfreeman at 13:330comments
ရန်ပိုင် on October 20, 2011 7:09 pm in သတင်း /2comments, Hits: 3726
မြန်မာကျပ်ငွေနှင့်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းထားပြင်ဆင်သတ်မှတ်ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့(IMF)မှကိုယ်စားလှယ်များယမန်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
(ဓာတ်ပုံ - AP)
အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည်နေပြည်တော်တွင်ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာန၀န်ကြီး ဦးလှထွန်း အပါအ၀င်ဗဟိုဘဏ်မှတာဝန်ရှိသူများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ရှိကြောင်း၊ငွေကြေးလဲလှယ်သည့် စနစ်ပြုပြင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍IMFကပြဋ္ဌာန်းထားသည့်စည်းမျဉ်းအမှတ်၈(Article8)နှင့်ညီညွတ်မှုရှိမရှိ လေ့လာရန် ရှိကြောင်း IMFကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် နီးစပ်သူတဦးက ပြောသည်။
Article8တွင်အစိုးရအနေဖြင့်ဗဟိုဘဏ်အပေါ်တွင်စွက်ဖက်မှုကင်းရှင်းရမည်၊ဗဟိုဘဏ်အနေဖြင့်လည်း နိုင်ငံ၏ငွေကြေးစနစ်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုမှန်ကန်စွာဖော်ပြပေးရမည်ဟုပါဝင်ပြီးထိုစည်းမျဉ်းများကို အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတိုင်း လိုက်နာရမည် ဖြစ်သည်။
အာဆီယံနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်သည့်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသည်Article8ကို၂၀၀၆ခုနှစ်တွင်သဘောတူ လက်မှတ်ထိုးခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
မြန်မာ့ရှေ့ဆောင်ဘဏ်၏အကြီးအကဲနှင့်မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဌ ဦးချစ်ခိုင်ကလည်းနိုင်ငံခြားငွေကြေးလဲလှယ်နှုန်း၊အထူးသဖြင့်ပြည်ပပို့ကုန်ရ၀င်ငွေ(ExportEarning) လဲလှယ်မှုနှုန်းကိုတည်ငြိမ်ရန်ဆောင်ရွက်လျှင်ပို့ကုန်လုပ်ငန်းများတည်ငြိမ်လာပြီးတိုင်းပြည်စီးပွားရေး ပိုမိုကောင်းမွန်လာမည်ဖြစ်သည်ဟုဧရာဝတီသို့ပြောဆိုသည်။
မြန်မာငွေနှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာလဲလှယ်နှုန်းအတက်အကျကို၉၀၀ကျပ်ဝန်းကျင်၌သတ်မှတ်မည်ဆိုလျှင် ပြည်ပပို့ကုန်လုပ်ငန်းများတည်ငြိမ်လာပြီးတိုးတက်လာမည်ဟုယုံကြည်ကြောင်းလည်းဦးချစ်ခိုင်က ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရသစ်တက်ပြီးနောက်ပိုင်းကျပ်ငွေတန်ဖိုးမြင့်တက်သွားပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ အပါအ၀င်နိုင်ငံခြားငွေကြေးလဲလှယ်နှုန်းမှာကျပ်၇၀၀အောက်သို့ကျဆင်းသွားရာပြည်ပပို့ကုန် လုပ်ငန်းရှင်များ၊နိုင်ငံခြားငွေကြေးလက်ဝယ်ကိုင်ဆောင်သူများထိခိုက်နစ်နာခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်ပြီးခဲ့သည့်သြဂုတ်လအတွင်းကပြည်တွင်းပြည်ပမှစီးပွားရေးပညာရှင်များကိုဖိတ်ကြားပြီး နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားအဆင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌစက်မှု(၁)(၂)၀န်ကြီးဦးစိုးသိန်းအပါအ၀င်ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းငြိမ်းတို့ကလည်းငွေကြေးလဲလှယ်နှုန်းကိုကျပ်၉၀၀နှင့်၁၀၀၀အကြားနှုန်းသေနှင့်နှုန်းရှင်ထားရှိရန် ပြောဆိုသည့်အပြင်နေပြည်တော်တွင်ပြုလုပ်နေသည့်အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင်လည်း ငွေကြေးလဲလှယ်နှုန်းထား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ရန် ဆွေးနွေးမှုများ ရှိခဲ့သည်။
ယင်းသို့ငွေလဲလှယ်နှုန်းပြင်ဆင်ရေးအတွက်IMF၏အကူအညီရရှိရန်လိုအပ်သဖြင့်မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာအကူအညီပေးရန်ပြီးခဲ့သည့်စက်တင်ဘာလဆန်းပိုင်းကတောင်းခံခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
စက်တင်ဘာလအတွင်းကအမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တွင်ကျင်းပသည့်IMFနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးတွင် ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာန၀န်ကြီးဦးလှထွန်းကလည်းငွေကြေးနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပိုင်းတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်စဉ်းစားနေကြောင်း၊မိမိနိုင်ငံစီးပွားရေးဖွံဖြိုးတိုးတက်စေရန်ကူညီမည်ဟုလည်း ယုံကြည်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ၁၉၅၂ ခုနှစ်မှ စတင်၍ IMF အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၅ခုနှစ်မတိုင်မီမြန်မာနိုင်ငံ၌စတော့အိပ်ချိန်းဈေးကွက်ဖွင့်လှစ်ရန်ရာထားလျက်ရှိပြီး၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် အများပြည်သူသို့အစုရှယ်ယာများထုတ်ဝေရောင်းချရန်စီစဉ်နေကြောင်းပြည်တွင်းအခြေစိုက်ElevenMedia ၏ အင်တာနက်သတင်းတွင်ရေးသားထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အာဆီယံ စီးပွားရေး အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံလည်း ဖြစ်လာရန် ရှိသည်။
Posted by justfreeman at 13:200comments
ဧရာဝတီ Monday, 10 October 2011 16:03
.အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)မှတ်ပုံတင်ရေးနှင့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေးကိစ္စများနှင့်ပတ် သက်ပြီးတစုံတရာဆုံးဖြတ်ထားခြင်းမရှိသေးကြောင်းမြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့အလည်အပတ်ရောက်ရှိနေသောနော်ဝေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယ၀န်ကြီးMr.Espen BarthEideနှင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းရှိနေအိမ်တွင်အောက်တိုဘာလ၈ ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံအပြီးသတင်းထောက်များနှင့်တွေ့ဆုံစဉ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကထိုသို့ ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
NLDပါတီသည်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရန်ဆုံးဖြတ်တော့မည်ဟုသတင်းများထွက်ပေါ်နေသည့် အတွက်တိကျရေရာစွာသိရှိလိုကြောင်းသတင်းထောက်တဦးကမေးမြန်းရာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က “လွှတ်တော်ထဲမှာနိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတာတွေကြားနေလို့အဲဒီ အပေါ်မှာအခြေခံပြီးဆွေးနွေးကြတာပါ။ဥပဒေတောင်မှဘာမှအတည်မပြုရသေးတာဘယ်လို ဆုံးဖြတ်ရမလဲ” ဟု ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ဝန်ကြီးဦးအောင်ကြည်တို့မကြာသေးမီကတွေ့ဆုံစဉ်ကလည်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးရေးကိစ္စကိုပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်လာမည့်အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်းလျက် ရှိကြောင်း၊ပါတီမှတ်ပုံတင်ရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး တစုံတရာဆုံးဖြတ်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း ပြောခဲ့သည်ဟုသတင်းထောက်များအား တွေ့ဆုံစဉ် ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
ဆက်လက်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကNLDအနေဖြင့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်၊မ၀င်ကိစ္စကိုလည်း မဆုံးဖြတ်ရသေးကြောင်း၊NLDသည် ပြောင်းလဲလာသော အခြေအနေများပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကမိမိအနေနှင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်ရေးကိုအစဉ်တစိုက် တောင်းဆိုခဲ့ပြီးမျှော်လင့် စောင့်စားလျက်ရှိကြောင်း အလေးအနက် ပြောဆိုသွားသည်။
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ စီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းလိုက်မှုကြောင့်တရုတ်-မြန်မာနှစ်နိုင်ငံအကြား မပြေလည်မှုများ ရှိခဲ့လျှင် ညှိနှိုင်း၍ရေရှည်အကျိုးကိုကြည့်ကာသဘောထားကြီးကြီးနှင့် ပြေလည်စေရန် ဆောင်ရွက်ကြစေလိုကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံပြည်သူပြည်သားအချင်းချင်းလည်းတဦးအပေါ်တဦးကြည်ကြည်လင်လင်ဖြစ်စေချင်ကြောင်း၊ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံအချင်းချင်း နားလည်မှုရှိစွာဖြင့်သင့်တင့်မှုရှိလျှင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း သူက ဆိုသည်။
နော်ဝေးနိုင်ငံဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလာရောက်သည့်ခရီးစဉ်အတွင်းပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရ ဦးရွှေမန်းနှင့်တွေ့ဆုံစဉ်ဦးရွှေမန်းက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအား မကြာမီ လွှတ်ပေးတော့မည်ဟု ပြောဆိုသွားသည်။
Posted by justfreeman at 06:310comments
ရန်ပိုင် Monday, 10 October 2011 18:06
.ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်းကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုပြန်လွှတ်ပေးတော့မည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သည့်နောက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုတချို့ကအကျဉ်းထောင်များသို့သွားရောက်ကာ စောင့်ဆိုင်းမှုများ ပြုလုပ်မည်ဟု သိရသည်။
၂၀၀၇ခုနှစ်ကရန်ကုန်မြို့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတခုတွင်တွေ့ရသော၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များ (ဓာတ်ပုံ-AP)
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏နေထူးနေ့မြတ်ဖြစ်သည့်သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့တွင်အကျွတ်အလွတ်ဟူသော အယူအဆဖြင့် အကျဉ်းသားများအား လွှတ်ပေးနိုင်ကြောင်း ပြောဆိုမှုများ ထွက်ပေါ်နေစဉ်မှာပင် ပြီးခဲ့သည့် သောကြာနေ့ကနော်ဝေးအသံလွှင့်ဌာန(NRK)ကိုသူရ ဦးရွှေမန်းကအထက်ပါအတိုင်း ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကျိုင်းတုံအကျဉ်းထောင်တွင်အကျဉ်းကျခံနေရသည့်၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်၏အမဖြစ်သူဒေါ်ကြည်ကြည်ညွန့်ကအစိုးရအာဏာပိုင်များထံမှ တစုံတရာဆက်သွယ်ခြင်းမရှိသေးသော်လည်းလာမည့်အောက်တိုဘာလ၁၃ရက်နေ့တွင် ကျိုင်းတုံထောင်သို့ သွားရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဧရာဝတီသို့ပြောသည်။
“တချို့ကလည်းကိုမင်းကိုနိုင်တို့ပထမအသုတ်လွတ်မယ်၊တချို့ကလည်းမလွတ်သေးဘူးပြောတယ်၊ဒါပေ မယ့် ကျမကတော့ လေယာဉ်လက်မှတ် ၀ယ်ပြီးပြီ။ သဘက်ခါကို သွားမယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ပြောသည်။
ထောင်ဒဏ်၆၅နှစ်ချမှတ်ခံရသည့်ကိုမင်းကိုနိုင်သည်လက်ရှိအခြေအနေတွင်အရိုးကျီးပေါင်းတက်ခြင်း၊ သွေးတိုးခြင်း၊နှလုံးတုန်ခြင်းစသည့်ရောဂါများကိုခံစားနေရကြောင်း၎င်း၏အမဖြစ်သူဒေါ်ကြည်ကြည်ညွန့်က ရှင်းပြသည်။
မကြာသေးမီကမြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်ဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင်လည်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်ရေးကို အထူးဦးစားပေး ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးသီးတောင်ထောင်တွင်အကျဉ်းကျခံနေရသည့်၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်သူ ကိုဌေးကြွယ်ကိုလည်း ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ထောင်အာဏာပိုင်များကဆေးကုသမှုနှင့် ထောင်ဝင်စာမှတ်တမ်းများတောင်းယူခြင်း၊ဓာတ်ပုံရိုက်ယူခြင်းတို့ပြုလုပ်နေကြောင်းမိသားစုဝင်တဦးဖြစ်သူ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းဟောင်း ကိုဖြိုးမင်းသိန်းက ပြောသည်။
“ဒီနေ့လား၊မနက်ဖြန်လားဆိုပြီးမိသားစုတွေအားလုံးကမျှော်လင့်နေကြတယ်။ကိုဌေးကြွယ်ကျန်းမာရေးက တော့ မကောင်းဘူး”ဟု၎င်းကဆိုသည်။
အစိုးရသစ်သည်နိုင်ငံတကာနှင့်မြန်မာပြည်သူများ၏ထောက်ခံမှုကိုရရှိစေရန်အတွက်နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအား လွှတ်ပေး မည်ဟု ထင်မြင်ကြောင်း ကိုဖြိုးမင်းသိန်းက ဆက်ပြောသည်။
ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားထောင်တွင်အကျဉ်းကျခံနေရသည့်လူရွှင်တော်ကိုဇာဂနာ၏ခယ်မဖြစ်သူ မငြိမ်းကမူ“ကိုဇာဂနာအိမ်ပြန်ရောက်မှပဲလွတ်တယ်လို့မှတ်လိုက်တော့မယ်။လွတ်မယ်ဆိုပြီး ပြောတာတွေများတော့ သိပ်မခံစားတော့ဘူး” ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏အကျဉ်းထောင်အသီးသီးတွင်ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းကျခံနေရသည့်နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားပေါင်း၂၀၀၀နီးပါးရှိသည်ဟုပြည်ပအခြေစိုက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း - မြန်မာနိုင်ငံ (AAPP) က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ပြည်တွင်းရှိနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများစုဖွဲ့ထားသည့်ကွန်ရက်ကလည်းယခုရက်ပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိအကျဉ်းထောင်နှင့်ရဲဘက်စခန်းများတွင်အကျဉ်းကျနေသောနိုင်ငံရေးသမားများ၏ စာရင်းများကိုတိတိကျကျသိရှိ နိုင်စေရန်အကျဉ်းသားမိသားစုများနှင့်တိုင်ပင်ကာစာရင်းပြုစုနေကြောင်း၊ ထိုစာရင်းကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ပေးအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted by justfreeman at 06:200comments
ခင်ဦးသာ Monday, 10 October 2011 16:58
.မြန်မာနိုင်ငံ၏မီဒီယာအခန်းကဏ္ဍ၌စာပေစိစစ်ရေးဌာနမရှိသင့်တော့ကြောင်းစာပေစိစစ်ရေးဌာန၏ အဆင့်မြင့်အရာရှိတဦးကမကြာမီရက်ပိုင်းအတွင်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းကိုပြည်တွင်းစာနယ်ဇင်းအသိုင်းအ၀ိုင်းက ထောက်ခံကြိုဆိုလိုက်ကြသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်ယမန်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းကတွေ့ရသောဂျာနယ်အရောင်းဆိုင်တခု(ဓာတ်ပုံ - AP)
မြန်မာနိုင်ငံသည်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုစတင်ကျင့်သုံးနေပြီဖြစ်၍စာပေစိစစ်ရေးဌာကိုထားရှိရန်မသင့်တော့ဟု စာပေစိစစ်နှင့်မှတ်ပုံတင်ဌာနဒုညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးတင့်ဆွေကပြည်ပအခြေစိုက်လွတ်လပ်သော အာရှအသံ(RFA)အသံလွှင့်ဌာနသို့ပြီးခဲ့သည့်စနေနေ့ကထိုသို့ပြောဆိုခဲ့ခြင်းအပေါ်စာပေအသိုင်းအ၀ိုင်းက ကြိုဆိုကြုခင်းဖြစ်သည်။
ဦးတင့်ဆွေ၏ပြောစကားသည်စာပေလောကသားများအတွက်ဝမ်းမြောက်၊၀မ်းသာ ကြိုဆိုရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊စိစစ်ရေးဌာနအားဖျက်သိမ်းမည်ဆိုပါကစာပေ၊စာနယ်ဇင်းအသိုင်းအ၀ိုင်းအနေဖြင့်လည်း တာဝန်ယူမှု၊တာဝန်ခံမှုများရှိလာမည်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၏အတိုင်ပင်ခံအယ်ဒီတာနှင့်စာရေးဆရာမောင်ဝံသ က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
စိစစ်ရေးမရှိလျှင်ရေးသားခွင့်ပိုမိုလွတ်လပ်မှုရှိမည်ဖြစ်ပြီး၊ရေးသားထုတ်ဝေပြီးသည့်စာစောင်များကိုသာ အာဏာပိုင်များကစိစစ်ရတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း၊စိစစ်ရာတွင်လည်းနိုင်ငံတော်၏မူဝါဒနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ၊ ဘာသာရေး၊ယဉ်ကျေးမှု၊ဥပေဒနှင့်အညီရေးသားမှုရှိမရှိတို့ကိုသာစိစစ်၍ဥပဒေချိုးဖောက်ပါကအရေးယူမှု၊ တရားစွဲဆိုမှုတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဟု ၎င်းကရှင်း ပြသည်။
“စနစ်တခုကတခုကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်အနည်းနဲ့အများဆိုသလိုပြဿနာတွေရှိလာမှာပါ၊ဒါတွေကိုစိုးရိမ် ကြောင့်ကြနေစရာမလိုဘဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရင်ဆိုင်စရာတွေကိုပြင်ဆင်ထားဖို့ပဲလိုတယ်”ဟု စာရေးဆရာမောင်ဝံသကဆိုသည်။
စာပေစိစစ်ရေးဌာနမရှိလျှင်ပိုမိုလွတ်လပ်စွာရေးသားလာနိုင်မည်ဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ထုတ်ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာများပါထုတ်ဝေခွင့်ရလာမည်ဆိုလျှင်လည်းပြည်သူများကိုမြန်ဆန်သွက်လက်စွာ သတင်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်၍ ပြည်သူများအတွက် များစွာအကျိုးရှိလာမည်ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
“သတင်းမှန်တွေကို ပြည်သူတွေက နေ့စဉ်ဖတ်ခွင့် သိခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ဝေဖန်ပိုင်းခြားမှုတွေ ပိုမိုလာမယ်”ဟု ဆရာ မောင်ဝံသ က ဆိုသည်။
OpenNewsဂျာနယ်နှင့်မြန်မာ့ဓနမဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာချုပ်ဦးသီဟစောကလည်းစာပေစိစစ်ရေးဖြုတ်သိမ်း မည့် ကိစ္စကို ကြိုဆိုကြောင်းပြောသည်။
“စိစစ်ရေးမရှိတာကကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်၊အရင်ထက်စာရင်ပိုလွတ်လပ်သွားတာပေါ့၊ကိုယ့်တာဝန်တော့ ကိုယ်ယူရမှာပါ၊အစိုးရကမီဒီယာဥပဒေတခုရေးဆွဲနေတယ်လို့ပြောတယ်၊ဘာတွေပါလဲဆိုတာတော့ မသိရသေးဘူး”ဟုဦးသီဟစော က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများနှင့်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးနေသောကမ္ဘာ့မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မှ စာပေစိစစ်ရေးဌာနမရှိကြောင်း၊မြန်မာနိုင်ငံသည်လည်းဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးနေသည်ဆို၍ စာပေစိစစ်ရေးဌာနလုံးဝမရှိသင့်တော့ကြောင်း၊စတုထ္တမဏ္ဍိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိမှသာကျန်သည့်မဏ္ဍိုင် သုံးရပ်အားပြည့်ပြည့်၀၀အထောက်အကူပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီးဒီမိုကရေစီစနစ်ပီပြင်လာမည် ဟု ရန်ကုန်မီဒီယာဂရု(ပ်)၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ကိုကို(စက်မှုတက္ကသိုလ်) က ပြောသည်။
အလားတူပုဂ္ဂလိကမီဒီယာများအနေဖြင့်ဂျာနယ်လစ်ဇင်ကိုအခြေခံသောမီဒီယာကျင့်ဝတ်အတိုင်းလိုက်နာ၍ ဥပဒေနှင့်အညီရေးသားကြမည်ဆိုပါကမည်သည့်အရာကိုမှစိတ်ပူပန်စရာမလိုတော့ကြောင်းလည်းဦးကိုကို က ဆိုသည်။
“မီဒီယာတွေကတခုခုဖောက်ဖျက်မိရင်ဥပဒေအရရင်ဆိုင်ရမှာပဲလေ။နောက်တခုကအာဏာပိုင်တွေကစိစစ် ဖြတ်တောက်ပြီးမှထုတ်တာကလွတ်လပ်စွာရေးသားခွင့်ကိုကန့်သတ်တဲ့သဘောပဲ၊ စိစစ်ရေးမထားတော့ဘူးလို့ အခုလို ပြောတာကိုလည်း ပဲ ကြိုဆိုပါတယ်”ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
စိစစ်ရေးဌာန ဖျက်သိမ်းပြီးနောက် ပုဂ္ဂလိကနေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာများထုတ်ဝေခွင့်ပြုမည်ဟု သိရကြောင်း၊ ပုဂ္ဂလိက နေ့စဉ် ထုတ် သတင်းစာများရှိမှသာ မီဒီယာအခန်းကဏ္ဍ ပီပြင်လာမည်ဖြစ်၍ နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာများ မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေသည်ဟု ဦးကိုကို က ဆိုသည်။
“နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေရှိလို့ပုဂ္ဂလိကနေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာမလိုအပ်ဘူးဆိုတာကဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင် တဲ့အရာပါ၊ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာဆိုတာဟာလွတ်လပ်တဲ့ မီဒီယာ မဟုတ်လို့ပါပဲ”ဟုလည်း၎င်းက ပြောသည်။
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးကျော်ဆန်းကနိုင်ငံပိုင်နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာများရှိ၍ပုဂ္ဂလိကနေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာများ ထုတ်ဝေခွင့်ပြုရန်အစီအစဉ်မရှိသေးကြောင်း၊မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်နှင့်တာဝန်ယူမှုတို့ကို ထိန်းကျောင်းပေးနိုင်မည့်ဥပဒေသစ်တရပ်ပြဌာန်းနိုင်ရန်ပြင်ဆင်နေကြောင်းအောက်တိုဘာလ၆ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့သော ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေး၌ ပြောဆို ခဲ့သေးသည်။
“လွတ်လပ်မှုနှင့်တာဝန်ယူမှု၊လွတ်လပ်မှုနှင့်ဆင်ခြင်တုံတရားတို့ကိုယှဉ်တွဲကျင့်သုံးသည့်မီဒီယာဖြစ်လာစေ ရန်ထိန်းကျောင်းပေးနိုင်မည့်မီဒီယာဥပဒေတစ်ရပ်ပြဌာန်းနိုင်ရေးလေ့လာဆောင်ရွက်နေသည်”ဟု ဦးကျော်ဆန်း က ဆိုသည်။
ရန်ကုန်မြို့၊ဗဟန်းမဲဆန္ဒနယ်မှဒေါက်တာမောင်မောင်ဝင့်၏“နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများကို ပြည်သူများပိုမိုအားထားလာရန်မည်သို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မည်နှင့်ပြည်တွင်း မီဒီယာလောကကို ပြည်သူ့အကျိုးပြုစတုတ္ထမဏ္ဍိုင်အဖြစ်မားမားမတ်မတ်ဖြစ်ထွန်းလာရန်မည်သို့ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်တို့ကိုသိလိုကြောင်း”မေးမြန်းချက်ကိုဖြေဆိုရာ၌ဦးကျော်ဆန်းက ထိုသို့ပြောဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“မီဒီယာကိုကာကွယ်လိုတဲ့အတွက်ဥပဒေပြဌာန်းမှာလား၊ထိန်းချုပ်လိုတဲ့အတွက်လား ဆိုတာ ပြဌာန်းတော့မှ သိရမှာပါ၊ကာကွယ်ပေးတာများရင်တော့မီဒီယာလောကဖွံ့ဖြိုးလာမှာအသေအချာပါပဲ”ဟုဦးကိုကိုက ဆိုသည်။
Posted by justfreeman at 05:450comments
ဧရာဝတီ Monday, 10 October 2011 12:48
.ဒီမိုကရေစီစနစ်တွင်စာပေစိစစ်ရေးမရှိသင့်ဟုစိစစ်ရေးဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးတင့်ဆွေကထုတ်ဖော် ပြောဆိုလိုက် သော်လည်း သတင်းအများစုကို စိစစ်ဖြတ်တောက်နေဆဲ ဖြစ်သည်။
ဦးတင့်ဆွေက“ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကူးပြောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ခေတ်နဲ့လျော်ညီအောင်စာပေစိစစ်ရေးကို မထားရှိသင့်တော့ဘူးလို့ထင်မြင်ယူဆပါတယ်”ဟုပြည်ပအခြေစိုက်RFAသတင်းဌာနကိုအောက်တိုဘာ၈ ရက်နေ့ကပြောဆိုလိုက်သော်လည်းသတင်းဂျာနယ်များတွင်ဧရာဝတီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းမှု နောက်ဆက်တွဲသတင်းများ၊ပြည်မြန်မာကုန်တိုက်ဆိုင်ခန်းပိုင်ရှင်များဆန္ဒပြသည့်သတင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပွားနေသောစစ်ပွဲသတင်းများအပါအ၀င်သတင်းအများစုဖော်ပြခွင့်မပြုဘဲဆင်ဆာ ဖြတ်တောက်နေဆဲ ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကစက်တင်ဘာလ၃၀ရက်နေ့တွင်ဧရာဝတီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းကြောင်းတရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းတရုတ်သတင်းမီဒီယာများနှင့်တရုတ်အစိုးရ၏ရှယ်ယာများပါဝင် သောChinaPowerInvestment(CPI)ကုမ္ပဏီတို့ကမြစ်ဆုံစီမံကိန်းရပ်တန့်မှုအပေါ်ပြန်လည်စဉ်းစား သုံးသပ်ပေးရန်နှင့်စီမံကိန်းရပ်တန့်သဖြင့်ဥပဒေကြောင်းအရရင်ဆိုင်ရမည်ဆိုသောပြောဆိုမှုများ၊ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်နိုင်ဆိုသောရေးသားချက်များဆက်တိုက်ဆိုသလို ပြုလုပ်လာခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်မြန်မာသတင်းမီဒီယာများကဧရာဝတီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းနှင့်ဆက်နွှယ်ပြီးတရုတ်သတင်း မီဒီယာများ၏ပြောဆိုရေးသားမှုများကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုရန်ရေးသားတင်ပြကြသော်လည်း စာပေစိစစ်ရေးဌာနကခွင့်ပြုချက်မပေးကြောင်းသိရသည်။
“တရုတ်မီဒီယာတွေမှာပါတဲ့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းရပ်တဲ့အပေါ်ဝေဖန်သုံးသပ်မှုကိုပြန်တုံ့ပြန်တဲ့သတင်းမျိုးတွေဖော် ပြခွင့်မရဘူး။မြစ်ဆုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတိုင်းကိုဖြုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ပေးချင်တဲ့အဓိကMessage ဖြုတ်ခံရပြီးကန့်သတ်ဖော်ပြခွင့်ပြုတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်”ဟုသတင်းဂျာနယ် တာဝန်ခံ အယ်ဒီတာတဦးက ပြောသည်။
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းသတင်းများသာမကအစိုးရပိုင်ပြည်မြန်မာကုန်တိုက်ကိုလေလံပစ်ပြီးပုဂ္ဂလိကသို့ လွှဲပြောင်း ပေးရန်ကုန်တိုက်အတွင်းရှိ ဆိုင်ခန်းများကိုအတင်းအကျပ် ဖယ်ရှားခိုင်းမှုကြောင့်ဆိုင်ခန်းပိုင်ရှင် ၂၀ကျော်ကဆန္ဒပြသည့်သတင်း၊ဆန္ဒပြသူအမျိုးသမီး၂ဦးကိုခံဝန်လက်မှတ်ရေးထိုးစေကာ ပြန်လွှတ်ပေးသည့် သတင်းများအား စာပေစိစစ်ရေးကဆင်ဆာဖြတ်တောက် ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
“ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာစိစစ်ရေးမရှိသင့်ဘူးလို့ပြောတာကိုကြိုဆိုတယ်။အပြောကိုအလုပ်နဲ့ညီအောင်ပြပါလို့ ပြောချင်တယ်။ပြည်မြန်မာကုန်တိုက်ဆိုင်ခန်းပိုင်ရှင်တွေဆန္ဒပြတာကနိုင်ငံရေးသတင်းမဟုတ်ဘူး၊ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကိုမထိခိုက်ဘူး။ဘာကြောင့် ပယ်တာလဲ၊ဘာဖြစ်လို့ ဖော်ပြခွင့် မပေးတာလဲ”ဟု ရန်ကုန် အခြေစိုက် သတင်းထောက်တဦးက မေးခွန်းထုတ်သည်။
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းအစိုးရစစ်တပ်နှင့်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်(KIA)တို့အကြား ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသောစစ်ပွဲများကြောင့်နောက်ဆက်တွဲမတည်ငြိမ်မှုသတင်းများကိုလည်း ဂျာနယ်များတွင် လုံးဝ မဖော်ပြနိုင်ရန် စာပေစိစစ်ရေးက ဖြုတ်ပယ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ကချင်မှာစစ်ဖြစ်လို့ကုန်သွယ်ရေးရပ်တယ်၊စားသောက်ကုန်တွေဈေးတက်တယ်။လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး စရိတ်ကြီးတယ်။ ဒါမျိုးသတင်းတွေရေးတာပါ။ အဲဒီလိုသတင်းမျိုးကိုတောင်စာပေစိစစ်ရေးက ပယ်တယ်။ စစ်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးဆိုတော့ဖော်ပြခွင့်ရဖို့မမျှော်လင့်နဲ့လို့တောင်ပြောရမလိုပဲ”ဟု ရန်ကုန် အခြေစိုက် သတင်းထောက်က ဆိုသည်။
စိစစ်ရေးမူဝါဒနှင့်မကိုက်ညီသောသတင်းများဖြုတ်ပယ်ခံနေရသည့်အပြင်လွှတ်တော်သို့သွားရောက် သတင်းယူခဲ့သောသတင်းထောက်များကိုလည်းပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသတင်းတပ်ဖွဲ့က အိမ်တိုင်ရာရောက် လိုက်လံစုံစမ်းပြီးကိုယ်ရေးရာဇ၀င်မေးမြန်းမှုများရှိနေကြောင်းပြည်တွင်းသတင်းထောက်တချို့က ပြောသည်။
“ကိုယ်လည်းမသိလိုက်ဘူး၊အိမ်လာသွားတယ်။ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်ဖောင်ဖြည့်ပေးဖို့လာပြောတယ်။တကယ် ဆိုရင်လွှတ်တော်မတက်ခင်ကတည်းကကိုယ်ရေးအကျဉ်းအပြည့်အစုံပေးထားပြီးသား။ဘာသဘောနဲ့ အိမ်အထိရဲကလိုက်လာသလဲဆိုတာမစဉ်းစားတတ်ဘူး”ဟုလွှတ်တော်တက်သတင်းယူခဲ့သော စာနယ်ဇင်းသမားတဦးက ဆိုသည်။
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးကျော်ဆန်းကသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပေးလျှင်အကျိုးထက်ဆိုးကျိုးသာ များကြောင်း၊ စာပေစိစစ်ရေးဌာနသည်တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးအကျိုးအတွက်ရပ်တည်နေခြင်းဖြစ်ပြီးဆက်လက်ရပ်တည် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားအခြေခံသောစတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ဖြစ်စေရန် ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း လွှတ်တော် အစည်းအဝေးများတွင် ပြောဆိုခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်လွတ်လပ်သောပုဂ္ဂလိကသတင်းစာထုတ်ဝေခွင့်မရှိသေးသည့်အပြင်သတင်းသမား ၂၀ နီးပါးမှာလည်းပြည်ပအခြေစိုက်သတင်းမီဒီယာများနှင့်ဆက်သွယ်သည်ဟုဆိုကာ အစိုးရ၏ မတရား ဖမ်းဆီး ထောင်ချခြင်းကို ခံနေရဆဲ ဖြစ်သည်။
Posted by justfreeman at 02:550comments
ပြည်တွင်းမှ GW အဖွဲ့ရဲ့ လေးနှစ်မြောက်မွေးနေ့ ဖိတ်ကြားလွှာ
Posted by justfreeman at 03:210comments
Labels: Ei Ei
ပြည်သူ့ရဲ့အငှားပါးစပ် ( သို့မဟုတ် ) ဝေနှင်းပွင့်သုံ
Posted by justfreeman at 16:090comments
ဧရာဝတီ Tuesday, 04 October 2011 17:35
.သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏မြစ်ဆုံစီမံကိန်းဆိုင်းငံ့ရေးဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်အံ့သြတုန်လှုပ်မိသည်ဟုစီမံကိန်းတွင် အများဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသောတရုတ်အစိုးရပိုင်ChinaPowerInvestment(CPI)ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌက တနင်္လာနေ့တွင် ပြောဆိုလိုက်သည်။
သို့သော်လည်းစီမံကိန်းကိုစီစဉ်ထားသည့်အတိုင်းပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြောင်း ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌကChinaDailyသတင်းစာနှင့် ပြုလုပ်သည့် အင်တာဗျူးတွင်အကျယ်တ၀င့်ပြောလိုက်သည်။
"သတင်းမှာပါလာတော့အင်မတန်အံ့သြသွားမိတယ်။ဆိုင်းငံ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဆုံးဖြတ်ခင်တုန်းက ကျနော်တို့ကို မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘာမှဆက်သွယ်လာတာမရှိဘူး"ဟုCPIကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌMr.LuQizhouက ပြောသည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည်ယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်စစ်အစိုးရ၀န်ကြီးချုပ်ဘ၀ကမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးပြီးတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအရှိန်မြှင့်လုပ်ဆောင်ရန်CPIကုမ္ပဏီကို မှာကြားခဲ့သူဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယခုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအလွန်အံ့သြမိခြင်းဖြစ်သည်ဟုMr.LuQizhouက ပြောသည်။
"ဆိုင်းငံ့တယ်ဆိုတာကတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းတယ်ဆိုတာကိုပြောတာဆိုရင်တော့ဒါဟာ ဥပဒေကြောင်းအရ ဆောင်ရွက်စရာတွေ ရှိလာတော့မှာပေါ့" ဟု Mr. Lu Qizhou က ပြောသည်။
CPIကုမ္ပဏီသည်ဒေါ်လာဘီလီယံ၂၀တန်မြစ်ဆုံဆည်၇ ခု စီမံကိန်းအတွက် ယခင်က မြန်မာစစ်အစိုးရထံသို့ ငွေကြေး မည်မျှ ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းစွာ မသိရသေးပေ။
ကုမ္ပဏီက ယခင်စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင် ဦးသန်းရွှေ၊ လက်ရှိ ဒုသမ္မတ သီဟသူရ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦးတို့ကို မြစ်ဆုံစီမံကိန်း အတွက် ဒေါ်လာ ၅ ဘီလီယံ အထိ ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း ထိုငွေထဲမှ တချို့ကို မြို့တော်သစ် နေပြည်တော် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း၊ ကျန်ငွေများ မည်သည့်နေရာတွင် ရှိနေသည်ကို ထိုနှစ်ဦးမှတပါး မည်သူမျှ မသိရကြောင်း စသည့် အတည်မပြုနိုင်သေးသည့် သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေသည်။
ယခုဆိုင်းငံ့ထားသည့်မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒေါ်လာ၃.၆ ဘီလီယံရှိကြောင်း၊ ဆိုင်းငံ့မှုကြောင့် နှစ်နိုင်ငံထိခိုက်နစ်နာမှုကြီးမားနိုင်ကြောင်း၊ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များက လျော်ကြေး အများအပြား တောင်းဆိုနိုင်ကြောင်း Mr. Lu Qizhou က ပြောသည်။
"စီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းတယ်ဆိုရင်တော့တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဏ္ဍ၊ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍမှာဆုံးရှုံးမှုကမျှော်လင့် ထား တာထက်ပိုများမှာဖြစ်ပါတယ်"ဟုMr.LuQizhouကပြောသည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် CPIကုမ္ပဏီ၊ မြန်မာနိုင်ငံ အမှတ် ၁ လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန၊ Asia World ကုမ္ပဏီတို့ သဘောတူညီထားချက်အရ မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် အစပြုခဲ့သည်။ စီမံကိန်းပြီးစီးလျှင် ထွက်ပေါ်လာမည့် လျှပ်စစ်ဓာတ် ၉၀ ရာနှုန်းကို တရုတ်နိုင်ငံသို့ နှစ်ပေါင်း ၅၀ တိတိ ပေးပို့ရမည် ဖြစ်သည်။ ထိုကာလ လွန်မြောက်လျှင် မြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်းကို မြန်မာနိုင်ငံက ရရှိမည် ဖြစ်သည်။
သောကြာနေ့က သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ဆိုင်းငံ့ရေး ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မြန်မာပြည်သားများက ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုလိုက်ကြသည်။ စနေနေ့တွင် ထွက်ပေါ်လာသောတရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဌာန၏ တုံ့ပြန်ချက်တွင်စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်သည့်တရုတ်ကုမ္ပဏီတို့၏ဥပဒေအရရပိုင်ခွင့်တို့ကို မြန်မာအစိုးရကအကာအကွယ်ပေးရန် တောင်းဆိုထားသည်။
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဌာန နှင့်CPIကုမ္ပဏီတို့၏ တုံ့ပြန်ချက်များတွင်မြန်မာပြည်သားတို့၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ စီမံကိန်းကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးနိုင်သည့် အခြေအနေများအကြောင်း ပါဝင်ခြင်း မရှိပေ။
တနင်္လာနေ့ကသမ္မတဦးသိန်းစိန်၏အကြံပေးအရာရှိတဦးကပြောကြားရာတွင်၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ယခုအစိုးရအဖွဲ့ သက်တမ်းကုန်ပြီး ပေါ်ပေါက်လာမည့် မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ လက်ထက်တွင် စီမံကိန်း နှင့် ပတ်သက်ပြီး ထပ်မံ ဆုံးဖြတ်မည်ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာအစိုးရကစီမံကိန်းကိုဆိုင်းငံ့ခြင်းကြောင့်ဥပဒေကြောင်းအရဖြေရှင်းရသည့်အခါလျော်ကြေး ပေးဆောင်ရဖွယ်ရှိကြောင်း၊စီမံကိန်းကိုဖျက်သိမ်းမည်ဆိုပါကအစိုးရချင်းဖြေရှင်းရမည့်ကိစ္စဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာ့မြစ်များ ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ (International Rivers Network-IRN) က ပြောသည်။
"ဒါမျိုးတွေကဖြစ်နေကျပါ။နိုင်ငံအတော်များများအထူးသဖြင့်လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတွေမှာနိုင်ငံခြားကုမ္ပ ဏီများနဲ့လုပ်တဲ့ ရေနံ၊သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း စီမံကိန်းတွေကို အဲဒီနိုင်ငံတွေကကိုယ်တိုင် ဆောင်ရွက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်"ဟုIRNမှဥပဒေပညာရှင်တရုတ်အမျိုးသမီး Ms.Grace Mang က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဌာန နှင့်CPIကုမ္ပဏီတို့၏တုံ့ပြန်ချက်များတွင်မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းလိုကြောင်းဖော်ပြထားကြသည်။မြန်မာအစိုးရဘက်ကတစုံတရာပြန်လည်တုံ့ပြန်မှု မရှိသေးပေ။
CPIကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌMr.LuQizhou၏တနင်္လာနေ့ပြောကြားချက်များတွင်ဝေဖန်သူများထောက်ပြနေသကဲ့သို့ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကြောင့်သဘာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပြဿနာများရှိမနေကြောင်း၊စီမံကိန်း ပြီးစီးပါက ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့တော်ကိုပင်ရေကြီးသည့် အန္တရာယ်မှ ပိုမိုကာကွယ်သွားနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း စသည့် အချက်များလည်း ပါဝင်သည်။
"မြစ်ဆုံစီမံကိန်းမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်ချက်ကြောင့် စီမံကိန်းကို စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းချောချောမွေ့မွေ့ ရှေ့ဆက် လုပ်ဆောင်သွားနိုင်မယ်လို့ ကျနော် တကယ့်ကို မျှော်လင့်ပါတယ်။ထွက်ပေါ်လာမယ့် အကျိုးအမြတ်တွေ၊ နှစ်ဘက်လုံးအဆင်ပြေမယ့် ရလဒ်တွေဟာ တရုတ် နဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်ဖြစ်လာမှာပါ"ဟုCPIကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌကChinaDailyသတင်းစာကို ပြောလိုက်သည်။
Posted by justfreeman at 16:000comments
ဧရာဝတီ Tuesday, 04 October 2011 21:44
.ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့ရှိအစိုးရ၀န်ထမ်းအိမ်ရာအနီးတွင်တနင်္ဂနွေနေ့ကမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အမျိုးသားတဦး သေ ဆုံးသွားကြောင်း ယနေ့ထုတ် အစိုးရ သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့သောနေရာသို့နယ်မြေခံရဲတပ်ဖွဲ့ကသွားရောက်စစ်ဆေးချက်အရ ပြည်သူလူထုအား ထိခိုက်သေကျေစေခြင်း၊ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့စေခြင်း၊မြို့၊ရွာ၊ရပ်ကွက်များမတည်ငြိမ်စေခြင်း စသည့် အကြံဖြင့် ဖောက်ခွဲရန် စီစဉ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်းသိရသည်ဟု မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာက ဆိုသည်။
မိုင်းဖောက်ခွဲရန်လာသူကိုယ်တိုင်တပ်ဆင်နေစဉ်ရုတ်တရက်ပေါက်ကွဲခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် ဆက်လက် စုံစမ်းဖော်ထုတ်နေကြောင်းလည်း သတင်းစာတွင် ပါရှိသည်။
သေဆုံးသည်သူ အသက် ၃၀ ခန့် အရွယ် ရှိကြောင်း သိရသည်။
မိုင်းပေါက်ကွဲမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးမည်သည့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မှ ဖြစ်ကြောင်း မသိရသေးသော်လည်း ကချင် လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့(KIO)က၎င်းတို့၏လက်ချက်မဟုတ်ကြောင်းငြင်းဆိုထားသည်။သို့သော် အစိုးရအာဏာပိုင်များက သောင်းကျန်းသူ ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ယူဆကြောင်းသတင်းစာ၌ ရေးသားထားသည်။
ယမန်နေ့ည ၈ နာရီခန့်ကလည်းမိုးကောင်းမြို့ရှိလွတ်လပ်ရေးကျောက်တိုင်အနီးတွင်ဗုံးပေါက်ကွဲမှု တခုဖြစ်ပွားခဲ့ ကြောင်း၊ ယင်းပေါက်ကွဲမှုတွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု မရှိကြောင်း သိရသည်။
ဇူလိုင်လ၁၁ရက်နေ့ကလည်းကချင်ပြည်နယ်မိုးညှင်းမြို့နယ်ကာမိုင်းဒေသတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားရာ လူ ၂၀ ခန့် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်လကတည်းက ဗုံးများဆက်တိုက်ပေါက်ကွဲခဲ့ရာ နေပြည်တော်၊ မန္တလေး၊ ပြင်ဦးလွင်၊ တောင်ငူ၊ မြစ်ကြီးနား စသည့်မြို့ကြီး များတွင် ပေါက်ကွဲမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
Posted by justfreeman at 15:450comments
ကိုဝိုင်း အင်္ဂါနေ့၊ အောက်တိုဘာလ ၀၄ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၄၂ မိနစ် .
ချင်းမိုင်(မဇ္ဈိမ)။ ။သမ္မတဦးသိန်းစိန်မှကချင်ပြည်နယ်မြစ်ဆုံဆည်လျှပ်စစ်စီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းလိုက်သည့် အပေါ်ဥပဒေကြောင်းအရရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမည်ဟုစီမံကိန်းတွင်အဓိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့် တရုတ်စွမ်းအင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်ပိုရေးရှင်းCPIကတနင်္လာနေ့ကသတိပေးပြောကြားထားသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကမြစ်ဆုံစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်သို့ရောက်ခဲ့စဉ်စီမံကိန်းတည်ဆောက်မှုများကို အရှိန်မြှင့်ရန်ပြောခဲ့သေးသဖြင့်နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ရသည်ဟုChinaPowerInvestmentCorporation ဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာLUQizhouကတရုတ်နိုင်ငံပိုင် ဆင်ဝှာသတင်းသို့ ပြောခြင်း ဖြစ်သည်။
မစ္စတာLUQizhou၏ပြောကြားချက်ကိုဆင်ဝှာသတင်းကကိုးကားထားရာတွင်“ကျနော်တော့တကယ့်ကို အံ့သြသွားတာ”ဟုပါရှိသည်။"အခုလိုစီမံကိန်းကို ရွှေ့ဆိုင်းထားမယ်လို့ကြေညာလိုက်တဲ့အတွက်ဆောက် လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေရပ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ဥပဒေကြောင်းအရဆက်သွားရမှာပေါ့” ဟုလည်း
မြစ်ဆုံဆည်လျှပ်စစ်စီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းလိုက်သည့်အပေါ်ဥပဒေကြောင်းအရရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမည်ဟု တရုတ်စွမ်းအင်ရင်းနှီးမြှုတ်နှံမှုကော်ပိုရေးရှင်းCPIကသတိပေးပြောကြား(ဓါတ်ပုံ SENGAUNG)
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေခန့်မှန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း၃,၆၀၀ရှိပြီး၂၀၁၉တွင်အပြီးလျာထားသည့်BOTစနစ် အကျိုးတူ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို“၂၀၀၆ခုဒီဇင်ဘာတွင်CPIနဲ့ အမှတ် ၁ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ဌာနတို့ အကြား ချုပ်ဆို
သည့်နားလည်မှုစာချွန်လွှာ၊၂ဝဝ၉ခုမတ်လနှစ်နိုင်ငံ အစိုးရအကြား ရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်ရေး သဘော တူညီချက်တွေအရ CPI က လုပ်ပိုင် ခွင့်ရှိနေတာပါ” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီလည်းပါဝင်သည့်စီမံကိန်းအတွက်ဥပဒေကြောင်းအရလိုအပ်သည့်အကျိုးတူ စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခွင့်ပြုချက်များ၊တရားသူကြီးများ၏မှတ်ချက်နှင့်သဘောတူ ခံဝန်ချက်များလည်း ရှိနေသည်ဟု CPI ဥက္ကဋ္ဌက အတိအလင်း ထည့်ပြောထားသည်။
စီမံကိန်းကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးပြီးယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များပျောက်ကွယ်ဆုံးရှုံးရပြီး ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်လယ်ယာများလည်းပင်လယ်ရေငံဝင်ကာပျက်စီးမည့်အန္တရာယ်ရှိနေသဖြင့် လူထုလူတန်းစား အသီးသီးက ကန့်ကွက်နေကြသည်။
အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း“ဧရာဝတီမြစ်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းသည်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်ခြင်းသာမက၊ကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်ကို စောင့်ရှောက်ခြင်းလည်း မည်ပါသည်” ဟု ၂ဝ၁၁ ခု သြဂုတ်လက ပန်ကြားခဲ့သည်။
CPIကနှစ်၅ဝစီမံလုပ်ကိုင်ခွင့်ရထားသည့်မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကြောင့်ဧရာဝတီအထက်ပိုင်းအပေါ်သက်ရောက်မှု ကို CPIကအကုန်ကျခံပြီးတရုတ်နိုင်ငံမှရေအားလျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလေ့လာဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည့်Changjiang Institute အပါဝင် နှစ်နိုင်ငံ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ၁၀၀ ကျော်တို့က တိုင်းထွာ လေ့လာခဲ့ကြသည်။
“ရေလွှမ်းမယ့်ဧရိယာကဧရာဝတီမြစ်ညှာတခုလုံးရဲ့၁.၄ ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိပါတယ်။စိုက်ပျိုးဧရိယာကလည်း နည်းနည်းလေးပါ။ဇီဝမျိုးကွဲတွေလည်းမထိခိုက်နိုင်ပါဘူး။ မြန်မာလျှပ်စစ် ဝန်ကြီးဌာနကလည်း ကျွမ်းကျင်သူ
တွေနဲ့ ဆွေးနွေးပြီးတော့ လက်ခံထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်” ဟု မစ္စတာLUQizhou က ဆက်ပြောသည်။
နိုင်ငံတကာမြစ်ချောင်းများကာကွယ်ရေးအန်ဂျီအိုအဖွဲ့InternationalRivers၏ ထိုင်းနိုင်ငံ တာဝန်ခံတဦးဖြစ်သူ မစ္စတာဖီယန်ဖွန် ဒီထက်စ် PianpornDeetesကမူ မြစ်ဆုံဆည် တခုတည်းကို ပြော၍ မရဘဲ ဧရာဝတီမြစ်ညှာရှိအခြားစီမံကိန်းများလည်းရှိသေးသည်ဟုဆိုသည်။ဧရာဝတီမြစ်သည် မြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်မှဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်အထိမှီတင်းနေထိုင်သူအားလုံး၏ ဘဝပင် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
“တနိုင်ငံလုံးအားထားရတဲ့ဆန်စပါးအဓိကထွက်ရာဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသကိုထိခိုက်မှာ အရေးတကြီး စိုးရိမ်စရာပါပဲ။ပြီးတော့ဆည်တမံကြောင့်ငါးနဲ့ရေသတ္တဝါတွေရဲ့ရွှေ့ပြောင်းသွားလာတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေလည်း ပိတ်သွားမှာပါ” ဟု မစ္စတာ ဖီယန်ဖွန် ဒီထက်စ်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ဧရာဝတီမြစ်ဖျား မေခနှင့် မလိခမြစ်ပေါ်ရှိ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း ရှစ်ခုအနက် စက်တပ်ဆင်အား မဂ္ဂါဝပ် ၆,၀၀၀ဖြင့်အကြီးဆုံးမြစ်ဆုံစီမံကိန်းတည်ဆောက်မှုသည်၁၀ရာခိုင်နှုန်းပြီးနေပြီဟုလွှတ်တော်တွင်း တရားဝင် ပြောဆို ချက်များအရ သိရသည်။
ယင်းစီမံကိန်းများ လည်ပတ်လျင် မြန်မာအနေဖြင့် အခွန်ကောက်ခံမှုမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၅,၄၀၀ ရရှိပြီး လျှပ်စစ် အခမဲ့ရနိုင်မည်ဟု CPI ဥက္ကဋ္ဌက ပြောသည်။
အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်းကယင်းစီမံကိန်းကိုမဖြစ်မနေဆက်လုပ်မည်ဟုစက်တင်ဘာ ၁ဝ ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်ကန့်ကွက်သူများအကြားဝေဖန်မှုများကြီးထွားလာပြီးနောက် စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့ တွင် နေပြည်တော်၌ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲတရပ် ကျင်းပခဲ့ရာCPIဥက္ကဋ္ဌ လည်းတက်ရောက်ပြီး စာတမ်းတစောင် ဖတ်ကြားသွားသေးသည်။
ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဝန်ကြီးဦးဇော်မင်းက စီမံကိန်း အကျိုးဆက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ အထိမလေ့လာရသေးကြောင်းဝန်ခံသွားပြီးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လေ့လာဆန်းစစ်မှုစံအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်မည့်“သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဥပဒေ”မရှိသေးသဖြင့်လေ့လာချက်များမပြည့်စုံနိုင်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။
InternationalRivers ၏ ထိုင်းနိုင်ငံ တာဝန်ခံ PianpornDeetes ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြီးပြည့်စုံသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဥပဒေတခုစတင်ရေးဆွဲရန်လိုအပ်နေကြောင်းသဘောတူသော်လည်း ဧရာဝတီမြစ်ညှာစီမံကိန်းများ၏ အချက်အလက်များကို လူထုအား ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ချပြရန် လိုအပ်သည်ဟု ဆိုသည်။
“စီမံကိန်းကိုရပ်ဆိုင်းထားမယ်လို့ကြေညာပြီးတော့နှစ်နိုင်ငံအစိုးရတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့နောက်ကွယ်မှာ ကြိတ်ပြီးညှိနှိုင်းတာမျိုးမဖြစ်စေလိုပါဘူး။လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုပြီး စီမံကိန်း ဆိုးကျိုးကို ခံရမယ့် သူတွေအတွက် တာဝန်ခံတာကို မြင်တွေ့လိုပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်းပေါ်၌ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း၁၈ခုကိုအကောင်အထည် ဖော်နေရာမြစ်ဆုံစီမံကိန်းသည်စက်တပ်ဆင်အား၆,၀၀၀ မဂ္ဂါဝပ်ဖြင့် အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးထာခစီမံကိန်းသည် ၆ မဂ္ဂါဝပ်ဖြင့်အသေးဆုံးဖြစ်သည်။စီမံကိန်း ၁၈ ခုပေါင်းလျင် စက်တပ်ဆင် အား ၂၀,၇၆၀ မဂ္ဂါဝပ်ရှိကြောင်း ၂၀၁၁ နှစ်ဆန်းပိုင်း တရားဝင် ထုတ်ပြန်ချက်များက ဆိုသည်။
Posted by justfreeman at 15:400comments
ခင်ဦးသာ Monday, 03 October 2011 19:00
.ဧရာဝတီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများဆိုင်းငံ့ထားမည်ဟုသမ္မတဦးသိန်းစိန်ကပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်တနေ့တွင် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကစီမံကိန်းတွင်ပါဝင်သည့်ကုမ္ပဏီတို့၏အကျိုးစီးပွားရေးကို ထိန်းသိမ်းပေးရန် မြန်မာအစိုးရကိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်သည်။
CPIကုမ္ပဏီ၊အမှတ်၁လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၊အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီတို့ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သည့်မြစ်ဆုံ စီမံကိန်း မြင်ကွင်းတခု
စီမံကိန်းအတွက်နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန်ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းပြီးမှလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း၊ လိုအပ်သောသိပ္ပံဆိုင်ရာလေ့လာမှုများကိုသေချာကျနစွာဆောင်ရွက်ပြီးမှစီမံကိန်းစတင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း စနေနေ့ကထွက်ပေါ်လာသည့်တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဌာနထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုသည်။စီမံကိန်းအားပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိမြန်မာနိုင်ငံသားများအဆက်မပြတ်ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်နေခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍တစုံတရာ ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေ။
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုဒေါ်လာ၃ဒဿမ၆ဘီလီယံအကုန်အကျခံတည်ဆောက်ရန်စီစဉ်ခဲ့ပြီးမေခ၊ မလိခမြစ်များပေါ်ရှိရေကာစီမံကိန်းများအတွက်တရုတ်နိုင်ငံကဒေါ်လာဘီလီယံ၂၀အထိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည်။
တရုတ်နှင့်မြန်မာအစိုးရတို့သည်ထိုစီမံကိန်းအတွက်၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများစတင်ခဲ့သည်။တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းမည်မျှအထိ ပြီးစီးနေကြောင်းကို နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရများက ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိသေးပေ။
ဤအတောအတွင်း မြစ်ဆုံဒေသစီမံကိန်းကိုဦးဆောင်ခဲ့သောတရုတ်ChinaPowerInvestment(CPI) ကုမ္ပဏီကပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းအတွင်းအစီရင်စာတစောင်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ထိုအစီရင်ခံစာတွင် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုနည်းပါးကြောင်း၊ဒေသစီးပွားတိုးတက်လာမည်ဖြစ်၍ စီမံကိန်းကိုဒေသခံကချင်လူထု၈၀ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကထောက်ခံကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ စီမံကိန်းပြီးစီးသည့်အခါပြောင်းလဲလာသည့်သဘာ၀၀န်းကျင်အနေအထားကြောင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးလာမည်ဟု ဆိုသည်။
ထိုအစီရင်ခံစာပါ အချက်များကို ကမ္ဘာ့မြစ်များကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့(InternationalRivers Network - IRN) က လက်ခံခြင်း မရှိပေ။
“အစီရင်ခံစာမှာပြောထားတဲ့ဇီဝမျိုးစိတ်တွေကိုနေရာပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတာဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပါ၊ဇီဝ မျိုးစိတ်တွေ၊ရှားပါးတဲ့ရေနေ၊ကုန်းနေသတ္တ၀ါတွေ၊အပင်မျိုးစိတ်တွေစတဲ့ဂေဟစနစ်တွေကိုတနေရာက တနေရာကိုပြောင်းရွှေ့လို့ မရပါဘူး”ဟုIRNမှဥပဒေပညာရှင်တရုတ်အမျိုးသမီး Ms.GraceMangကဧရာဝတီကိုပြောသည်။
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းများ တည်ဆောက်ရာ၌ အဆင့် ၅ ဆင့် ပါဝင်ပြီး ၎င်းတို့ ရရှိသည့် မှတ်တမ်းများအရ အဆင့် ၂ ဆင့်ပြီးမြောက်နေပြီဟုသိရကြောင်း၊CPIကုမ္ပဏီက နောက်ဆုတ်ပေးရန် အလားအလာမရှိကြောင်း သူက ရှင်းပြသည်။
မြန်မာပြည်မှသဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသမားဦးအုန်းကလည်းCPIကုမ္ပဏီ၏ အစီရင်ခံစာကို ရေးသားထုတ်ပြန်သူများသည်ပညာရှင်အစစ်အမှန်များမဟုတ်ဘဲကုမ္ပဏီကိုယ်စားပြုသူများသာ ဖြစ်သည့်အတွက် ထိုသို့ တာဝန်မဲ့ စကားပြောဆိုခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်လိုက်သည်။
“မြစ်ဆုံတ၀ိုက်မှာရှားပါးမျိုးစိတ်ရာချီရှိတယ်၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုပမာဏများတယ်၊ ဒါ့အပြင်တရုတ်(နိုင်ငံ)ရဲ့လုပ်ရပ်ဟာမြန်မာတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှု၊ရိုးရာဒေသဓလေ့တွေပါစော်ကားတဲ့ သဘောပါပဲ၊ကျနော်နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ မြစ်ဆုံတ၀ိုက်ကိုတရုတ်တပြည်လုံးနဲ့မလဲနိုင်ဘူးလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်” ဟု ဦးအုန်းက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးနိုင်မည့်ပမာဏကြီးမားသည်ဟုတရုတ်ပညာရှင်အစစ်အမှန်များက လေ့လာ သုံးသပ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ဦးအုန်းက ဆက်လက် ရှင်းပြသည်။
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဌာန၏တုံ့ပြန်ချက်စနေနေ့တွင်ထွက်ပေါ်လာသော်လည်းသမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ အကြံပေးတဦးဖြစ်သူ ဒေါက်တာနေဇင်လတ်ကမူ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ထိခိုက်ဖွယ်မရှိဟု ဆိုသည်။
စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍နှစ်နိုင်ငံအစိုးရအကြား လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ ဆွေးနွေးမှုများရှိကြောင်း၊ ရေရှည်အရ ကောင်းသည့်ဘက်ကိုသာဦးတည်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊တရုတ်ကုမ္ပဏီများနှင့်မြန်မာအစိုးရကြား ဆက်လက်ညှိနှိုင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာနေဇင်လတ်က ဘီဘီစီ သတင်းဌာနကို ပြောသည်။
“အစိုးရအဖွဲ့ဆိုတာက တဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့က မူဝါဒတွေ မတူပါဘူး၊ ဒီတော့ နောက်လာမယ့် အစိုးရက ဆက်လုပ်မယ် မလုပ်ဘူး ဆိုတာတော့ မသိပါဘူး” ဟူသော ဒေါက်တာနေဇင်လတ်၏ ပြောဆိုချက်ကို ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်းက ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ထုတ်လွှင့်သွားသည်။
တရုတ်အစိုးရသည် ၎င်းတို့၏ စွမ်းအင်လိုအပ်မှုအတွက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရေအား လျှပ်စစ်စီမံကိန်းများ စီစဉ်နေရုံသာမက ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူမြို့မှ တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွယ်တန်းမည့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်း စီမံကိန်း၊ ကျောက်ဖြူ ရေနက်ဆိပ်ကမ်း ကဲ့သို့သော စီမံကိန်းကြီးများကို ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ဆယ်ချီ၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် စွမ်းအင်လိုအပ်ချက် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်အတွက် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှ ရေနံကို ပင်လယ်ဓားပြ ထူထပ်သည့် မလက္ကာရေလက်ကြားကို ဖြတ်ကာ တင်သွင်းနေရသည့် ကုန်ကျစရိတ် များသည့်အပြင် စိန်ခေါ်မှုများ၊ အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသည်။
ကျောက်ဖြူဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းပြီးစီးသွားပါက မလက္ကာရေလက်ကြားကို ဖြတ်ရန် မလိုတော့ဘဲ ရေနံကို ကျောက်ဖြူ ဆိပ်ကမ်း ကြားခံထား၍ တင်သွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ရခိုင်ကမ်းလွန်ဒေသမှ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ အများအပြား ကိုလည်း တရုတ်နိုင်ငံက နှစ် ၃၀ ထုတ်ယူရန် မြန်မာအစိုးရနှင့် စာချုပ် ချုပ်ထားပြီးဖြစ်သည်။
ကျောက်ဖြူစီမံကိန်းသည်တရုတ်နှင့်မြန်မာအစိုးရတို့အတွက်နိုင်ငံရေး၊စစ်ရေး၊စီးပွားရေး မဟာဗျူဟာကျသည့်စီမံကိန်းဖြစ်သည့်အပြင်သဘာဝဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်း၊အမြန်ရထားလမ်း စီမံကိန်းတို့သည်လည်း နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရ၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် အရေးပါသည်ဟု ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့ လှုပ်ရှားမှု ဆန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့ တာဝန်ခံ ကိုဝင်းအောင်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ရေနက်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်းနှင့်ဆက်စပ်နေသော ရေနံသိုလှောင်ရုံ၊ သဘာဓာတ်ငွေ့သိုလှောင်ကန်၊ ဓာတ်ငွေ့သန့်စင်စက်ရုံ စသည့် ဓာတုစက်ရုံများကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၊ ဒေသခံတို့၏ ထိခိုက်နစ်နာမှုများ ကြီးမားသော် လည်း ထိုကိစ္စကို ပြည်သူများ သိခွင့် မရကြောင်း ကိုဝင်းအောင်က ဆိုသည်။
ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်းစာချုပ်အရစီမံကိန်းမှ ထွက်သည့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့အားလုံးကို တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့မည်ဟု သိရသည်။
ရခိုင်ကမ်းလွန် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ၁၀၀ မီလျံကုဗမီတာအား အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းများ၊ အစိုးရနှင့် နီးစပ်သည့် ကုမ္ပဏီများ အတွက် အသုံးပြုသွားရန်ရှိကြောင်း ကိုဝင်းအောင်က ပြောသည်။
Posted by justfreeman at 14:540comments
ပြည်တွင်းမှ GW အဖွဲ့ရဲ့ လေးနှစ်မြောက်မွေးနေ့ ဖိတ်ြ...
ပြည်သူ့ရဲ့အငှားပါးစပ် ( သို့မဟုတ် ) ဝေနှင်းပွင့်သု...